देशैभर जन-स्तरबाट लकडाउन उल्लङ्घन हुन थाल्यो !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/देशैभर जन-स्तरबाट लकडाउन उल्लङ्घन हुन थाल्यो !!
देशैभर जन-स्तरबाट लकडाउन उल्लङ्घन हुन थाल्यो !!
काठमाडौं । कोरोना भाइरस निय`न्त्रणका लागि लाक डाउन गरिएपनि देशभरी नै जनस्तरबाट यसको उल्ल`ङ्घन हुन थालेको छ । सरकारले आइतबार वैशाख २५ गतेसम्म लकडाउन जारी रहने निर्णय गरेको छ । तर जनस्तरमा भने यसको पालना भएको पाइएको छैन् । चैत ११ बाट जारी लक डाउनको समय लम्बिदै गएपछि सर्व`साधारण र स्थानीय तहहरुले यसको उल्लंघन गरिरहेका छन् ।
उपत्यका लगायतका देशका अन्य ठूला सहरबाट गाउँ जाने सर्वसाधारणहरुको भीड छ । स्थानीय तहहरुले गाडी नै बुकिङ गरेर आफ्ना नागरिकहरुलाई गाउँ भि`त्र्याइरहेका छन् । कोरोना नियन्त्र`णका लागि सामाजिक दुरी कायम राख्नुपर्ने स्वास्थ्य विज्ञहरुले बताइरहेपनि स्थानीय तहहरुले एउटै गाडीमा ठूलो सं`ख्यामा सर्वसाधारण राखेर गाउँ भित्र्याइरहेका छन् । यसैबीच विराटनगरबाट उद्दार गरिएका केही व्यक्तिहरु नाग`ढुंगामा अलपत्र परेका छन् ।
विराटनगरबाट आएका गाडीहरु प्रहरीले उपत्यका प्रवेश गर्न नदिएपछि उनीहरु नाग`ढुंगामै अलपत्र परेका हुन् । विराटनगर महानगरपालिकाले विभिन्न ७ वटा गाडीमा राखेर १ सयभन्दा बढी नागरिकलाई काठमाडौं पठाएको थियो । यसैगरी रतुवामाई नगरपालिकाले पनि आफ्ना नागरिकहरुलाई लैजान पठाएको गाडीमा आएकाहरु पनि अलपत्र छन् । विराटनगरबाट काठमाडौं आएका सर्व`साधारण का`गेश्वरी मनोहरा ८ का स्थानीय विष्णु`प्रसाद गुरागाईंले काठमाडौंमा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकको उद्दार गर्न रतुमाइ नगरपालिकाले पठाएको गाडीमा आफु आएको बताए ।
नगरपालिकाले काठमाडौं जान लागेको गाडी खाली नै भएकाले आफुहरुलाई त्यसैमा जान भनेपछि नाग`ढुंगामा प्रहरीले रोकेर राखेको बताए । गुरा`गाईंका अनुसार नगरपालिकाले उपत्यकाबाट २ सयभन्दा बढी नागरिकहरुलाई लैजान गाडी पठाएको हो ।सिन्धुपाल्चोक जान विराटनगरबाट आएका याङ`लुङ तामाङले प्रहरीले आफु`हरुलाई रोकेपनि आफुसँगै आएकाहरुलाई गाडीमा काठमाडौं पठाएको आरोप लगाए ।
‘विराटनगरबाट मेयरले मिलाएर पठाउनुभयो । बाटोमा केही भएन् । गाडीमा औषधि पनि हालिएको थियो । तर यहाँ आएपछि हामीलाई प्रहरीले रोकेको छ । केहीलाई काठमाडौं पठाएको छ ।’, उनले भने, ‘पठाउने भए सबैलाई पठाउनुपर्ने नभए सबैलाई फर्काउनुपर्ने थियो । हाम्रो बिजोग भयो ।’
लक डाउनको चौतर्फी उल्ल`ङ्घन हुन थालेपछि गृहमन्त्रालयले लक डाउन कडाई गर्न निर्देशन दिएको छ । गृहले सोमबार ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधि`कारीलाई पत्राचार गर्दै लक डाउन उल्लं`घन गर्न नदिनका लागि आवश्यक कदमहरु चाल्न निर्देशन दिएको हो । सवारी पास नभएका सवारी पनि चलेको पाइएको भन्दै गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई थप कडाई गर्न पत्राचार गरेको हो ।